Imara Udiri Igwe Ulo Nso
Home / blog / Ath maara Horlọ mposi “Na-esi ”sị” Dị Njọ Chọta Isi Ikike Kwadoro Ya!
Ath maara Horlọ mposi “Na-esi ”sị” Dị Njọ Chọta Isi Ikike Kwadoro Ya!
2020 / 10 / 22 nhazi ọkwablog 1967 0
Businesslọ Akwụkwọ Azụmaahịa nke ụlọ ịsa ahụ
You maara ka ihe jọgburu onwe ya ụlọ ịsa ahụ dị? Dabere na nyocha ahụ, isi ụlọ mposi na isi ísì nwere ike ịkpata ụkwara ume ọkụ, bronchitis, rashes, na ọrịa obi na ọrịa ndị ọzọ.
Ihe kachasị njọ bụ na ndị mmadụ na-etinye ma ọ dịkarịa ala afọ ise nke ndụ ha na ime ụlọ ịwụ ahụ, na-eji ụlọ mposi karịa minit 15 kwa ụbọchị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa abụọ kwa izu, nke yiri afọ ise nke ndụ ha nke "gas na-egbu egbu" gbara gburugburu, chere banyere ihe niile jọgburu onwe ya!
E nwere Isi Nkwenye anọ dị ukwuu gbasara Deodorization Ime ụlọ
Omenala ime ụlọ ịsa ahụ nke ọdịnala nwere nghọtahie anọ dị mkpa, ka anyị lee anya.
Echiche #gha # 1.
Enweghị Mmetụta Na Ahụike Mmadụ
Ihe na-esi ísì ụtọ nke mmadụ na-ebu ammonia, hydrogen sulfide, uric acid na gas ndị ọzọ na-emerụ ahụ, ọkachasị hydrogen sulfide, iku ume ogologo oge ga-eme ka mgbochi mmadụ ghara ịdaba, na-akpali mmetụta nke mmadụ nke isi na akụkụ ndị a na-ahụ anya, dị mfe iji mee ka akụkụ ahụ ghara ịza ajụjụ, ọnụ ọgụgụ, karịsịa maka ndị agadi, ụmụ nwanyị dị ime, ụmụaka na-enwekwu mmerụ ahụ.
Echiche Twogha nke Abụọ.
Nọmalị Mepee Iyuzucha Fan
Adreesị Odor Na nje na-efe efe
Iyuzucha ofufe nwere ike na-arụ ọrụ na ime ụlọ ịwụ ikuku nnọchi, ma n'ihi na iyuzucha ofufe na-elu, ọtụtụ nke ndị dị arọ na-emerụ ihe na-egbu egbu ahụ nwere ike ghara wezuga n'ụzọ dị otú a: nje bacteria na-adịkarị agbakwunye na mgbidi, akwa nhicha ahụ na ntutu. ahịhịa na ihe ndị ọzọ, adịghị mfe ewepu site na iyuzucha ofufe si.
Echiche Threegha nke Atọ.
Esi ísì ụtọ, Freshener
Ọ Na-ewepụ dolọ Ime ụlọ ịwụ.
A na-eme ihe na-esi ísì ụtọ na fresheners iji kpuchie isi pụrụ iche site na ịmịpụ ísì ụtọ, ha enweghị ike imeghachi omume na gas ndị na-akpata isi pụrụ iche, dịka amonia na hydrogen sulfide, ha enweghị ike ire ma ọ bụ wepụ gas ndị dị otú ahụ.
Na mgbakwunye, imirikiti aromatics nwere mgbanaka benzene, aldehydes na ihe ndị ọzọ, iji ogologo oge nwere ike ibute nsị na-adịghị ala ala, ọbụnakwa bute ọrịa kansa.
Echiche 4gha XNUMX.
Mmegharị Bowel Stinky.
Ole na ole Flushes Ga-eme.
Mmebi, anyị na-esi isi ísì nke nsị a na-ewepụta mgbe ihe na-esi ísì juputara ụlọ mposi niile ma kesaa ụlọ ịsa ahụ, ọ bụrụ na oge a ka ị na-agbapụ, oge oke mmiri ozuzo ahụ ga-ewepụta mposi nke gas na-esi ísì ọjọọ na ọtụtụ nje na ime ụlọ ịwụ ahụ na ozugbo n'ime akụkụ iku ume mmadụ, na-akpalite akwara, nwere ike ibute ọrịa n'ụzọ dị mfe.
Ebee ka athlọ mposi na-esi ísì si abịa na otu esi edozi ya?
1, isi iyi:
Inslọ na-agbapụ ala mmiri
Njikọ ahụ bụ ọkpọkọ drain, nke na-emekwa dị ka ihe mgbochi megide isi na ụmụ ahụhụ na-efe efe. N'oge a, e nwere U-ụdị na ụdị T-drain mmiri na ahịa. u-ụdị n'ala igbapu na-ekewa n'ime emighị emi mmiri akara n'ala igbapu na miri emi mmiri akara n'ala igbapu dị ka ogologo nke mmiri nchekwa gbagọrọ agbagọ. Mgbe mmiri dị na nchekwa ahụ na-ekupụ wee kpoo, isi nke drain ahụ ga-arịgo.
Mgbe mmiri ahụ gafere, ike ndọda ga-amanye akara ahụ ka ọ daa, mmiri ahụ ga-alaghachikwa n'ọnọdụ ya mgbe agbapụchara, gbakwunye magnet magnet ga-ejidesi ya ike. N'ihe banyere ikuku: T-drain siri ike karịa U-drain, ọ bụrụ na ala ala nwere isi na-adịghị mma, ihe mbụ ị ga-atụle bụ U-drain ahụ kpochapụrụ mmiri, naanị ịkwesịrị ịwụnye mmiri n'ime ya. ime ka ọ ghara ikuku.
(1) Otu ga-agbanwe, ma ọ bụrụ na ala igbapu mmiri akara bụ 50mm, ma ọ bụ akara nke ala igbapu bụghị uko, ma ọ bụ mebiri emebi, dochie ya ezi mma igwe anaghị agba nchara ika n'ala igbapu.
(2) Nke abuo, kaa ya akara, ma o buru na odi uzo di n’etiti mmiri na efere, gwuo iko iji kpochie ya.
(3) Disinfection, wunye ọgwụ disinfectant n'ime ala igbapu igbari fọduru dị ka bat ntutu na ịsa ahụ.
(4) Na-agbanye, mgbe ụfọdụ na obere ịwụ mmiri, gbanye ala mmiri, ihe fọdụrụ na drain ahụ ga-ekpochapụ, ma hụ na mmiri mmiri mmiri.
(5) Lelee okpu ikuku nke ọkpọkọ drainage n'elu ụlọ iji hụ ma ọ bụrụ na irighiri ihe kpochiri ya, ọ bụrụ na ọ dị, hichaa ya.
2, Isi Iyi Nke Odor:
Saa Basin Drainage
(1) A na-etinye ọkpọkọ nsị mmiri dị mkpụmkpụ ozugbo n'ime ala ma ọ bụghị akara ahụ ka a na-emechi, na-eme ka ọkpọkọ drain ahụ laghachi na uto.
(2) Enweghị ebe nchekwa mmiri na-ehicha na ọkpọ mmiri na-asacha, na-eme ka isi ísì laghachi.
(3) hairsa ntutu na ihe ndị ọzọ dị na mgbidi ọkpọkọ dị n'akụkụ ebe nchekwa mmiri, na-aka njọ mgbe ogologo oge gasịrị, nhazi ísì, na-eme ka isi ísì laghachi.
(1) Fanye ịsa efere mkpụmkpụ ọkpọkọ mmiri n'ime ọkpọkọ ọkpọ mmiri iji mee akara roba ma gbochie ọwa isi nloghachi.
(2) dị ka ebe a na-asacha efere n'okpuru drainpipe adịghị echekwa mmiri gbagọrọ agbagọ, enwere ike dochie ya na sooks na eriri igwe, nguzobe nke mmiri gbagọrọ agbagọ, na-egbochi ọwa ísì nlọghachi.
(3) iji na-ehicha ihu nke ntutu na ihe ndị ọzọ mgbe ị na-asacha, ekwela ka ọ nọrọ nso n'akụkụ ebe nchekwa mmiri dị na mgbidi nke ọkpọkọ ahụ.
3, Isi Iyi Nke Odor: Ulo Mposi (Flange) Ulo mposi Na Njikọ nke Pipe Sewer, E nwere Akara, A makwaara dị ka Flange. Ọtụtụ Odlọ ịsa ahụ na-esi ísì ụtọ, adịghị arụnye n'ihi akara ahụ kpatara.
(1) Wepu ụlọ mposi ọzọ wee wughachi akara ahụ.
(2) Ọ bụrụ na taịl nile dị gburugburu mposi bụ oghere, mezie taịl ahụ mepere emepe, ma mezie njikọ dị n’etiti mposi na taịlị ala.
(3) Mgbe ụlọ mposi gachara, kpuchie mkpuchi mposi ahụ ozugbo.
(4) na - ejikarị mmiri asacha ụlọ mposi, ka e wee ghara ichebe mmiri gbagọrọ agbagọ na mmiri nwụrụ anwụ, mmiri mebiri emebi.
(5) Jiri ihe eji eme ihe (ma ọ bụ acid) na-ehicha ụlọ mposi mgbe niile.
4, isi mmalite.
Ntutu na ihe ndi ozo na-esi isi Shosa ntutu isi na ihe ndi ozo, na-abanye n'ime ala igbapu igbapu mmiri, ihe ndi ozo na mgbidi nke igbapu, ihe ojoo na ihe ojoo, na-eme ka nloghachi nke isi.
(1) Imechi ụlọ ọrụ ịsa ahụ mgbe niile.
(2) Na-ekesa nje ugboro ugboro iji gbuo ụmụ nje.
Nke gara aga :: Mirrorlọ mposi ndozi, 99% nke ndị mmadụ ga-eleghara a zuru ezu Osote: Ihe karịrị 10,000 Ekele na Ime ụlọ ịsa ahụ, Nchịkọta Na-atụ aro!
Etu esi edochi ihe eji esi nri kichin?
Why The Right Kitchen Foset Makes A Iche
5 Ihe Na-eme Nnukwu Ihe eji esi nri
Ihe ị ga - eme mgbe ị na - azụta ihe eji esi nri
2020 US Bathroom Trends Report: Smart Toilets, Sensor Faucets, Na Omenala Bat ...
Ndị NASA họpụtara ha, Tolọ mposi atọ a na-aga ọnwa!
KPỌTỤRỤ ANYỊ E-mail: sales@wowowfaucet.com